Soosaarka Wershada Shiinaha ee Monoblock DCV40 Soosaarka iyo Warshadaha | Junbao
Moodeel DCV40 oo leh cadaadis dhexe oo heerkiisu sareeyo ayaa ah unugyo xakameysan oo madax-bannaan oo ay sameysay shirkadeena. Val Walxaha hubinta gudaha: Cabbirka waalka ee ku jira gudaha weelka 'valve' waa in uu hubiyo in saliida biyuhu aysan soo laaban. Firmada dayax-gacmeed ee gudaha: Foolka ka baxa gudaha tuubada waalka wuxuu awoodaa inuu hagaajiyo nidaamka neerfaha ee shaqada. ♦ Dariiqada Saliidda: Barbarro barbarro ah, awood ka baxsan xulashada Way Jidka Kontoroolka: Kantaroolka gacanta, kontoroolka pneumatic, hydraulic iyo xakamaynta korantada ikhtiyaar ahaan. ... al ...
Moodeel DCV40 oo leh cadaadis dhexe oo heerkiisu sareeyo ayaa ah unugyo xakameysan oo madax-bannaan oo ay sameysay shirkadeena.
Val Walxaha hubinta gudaha: Cabbirka waalka ee ku jira gudaha weelka 'valve' waa in uu hubiyo in saliida biyuhu aysan soo laaban.
Firmada dayax-gacmeed ee gudaha: Foolka ka baxa gudaha tuubada waalka wuxuu awoodaa inuu hagaajiyo nidaamka neerfaha ee shaqada.
♦ Dariiqo Saliid ah: Barbarro barbar socda, awood ka baxsan xulashada
Way Dariiqa Koontaroolka: Xakamaynta gacanta, kantaroolka pneumatic, hydraulic iyo xakamaynta korantada ikhtiyaar ahaan.
♦ beddelidda dhismaha: dhismaha monoblock, leversharser 1-8 ah.
Fun Shaqada Spool: 0, Y, P, A.
♦ Xulasho: Qufulka dareeraha ayaa la heli karaa si loogu daro dekada A iyo B.
Fure-weyda waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa nidaamka dareeraha mashiinka forklift, gaariga deegaanka iyo mashiinnada rakiba iftiinka.
Model Dcv40 Xogta Xogta
Hore: Qiimaha kontoroolka Monoblock 5200
Xiga: Monoblock Control Valve P80